OHIO: Colonel ka tirsanaa Dowladii Siyaad Barre oo lagu dhegan yahay. - Caasimada Online
Home Warar OHIO: Colonel ka tirsanaa Dowladii Siyaad Barre oo lagu dhegan yahay.
OHIO: Colonel ka tirsanaa Dowladii Siyaad Barre oo lagu dhegan yahay.
Colonel horey uga tirsanaa MilatarigiiSomalia, ayaa waxa uu ka masu’uul ahaa jirdilka nin u dhaq dhaqaaqi jiray xuquuqda aadanahaSomalia, sanadihii sideetamaadkii, waxaa sidaas xukmiyay xaakim federal ah oo jooga dalka Mareykanka.
Go’aankaasi ayaa waxa uu albaabada u furi doonaan dhageysi dacwadeed iyo suurta galnimada magdhow lacageed.
Colonel Cabdi Adan Magan oo dhowr sano ku noolaa gobolka Ohio, ayaa ku guul darreystay inuu keeno wax caddeymo ah oo ka leexinaya xadgudubyadii xuquuqda aadamaha ee ay geysatay dowladdii Maxamed Siyaad Barre, sida uu sheegay xaakim George Smith, oo jooga magaalada Columbus.
Abukar Xasan Axmed oo ah garyaqaan iyo u ololeeye xuquuqda aadamaha ah oo degan magaalooyinkaLondoniyo Muqdisho, ayaa sanaddii 2010 gudbiyay dacwad ka dhan ah Magan oo uu sheegay inuu 3 bil xabisay, kadibna jir dil u geystay. Waxa uu sheegtay dhaawacyo ay ka mid yihiin inuu dhib ka gaaray kaadi heysta.
Abuukar ayaa sheegay in Magan waqtigaas uu ahaa Dambi baaraha guud ee hay’addii nabad sugida qaranka Soomalaiyeed.
Tallaabada xigta ee laga filayo Abuukar ayaa ah inuu dacad kusoo oogo Magan.